Qoryaha Boombalaha Ma U Fiican Yihiin Caruurta? | Xaqiiqonews
Qoryaha Boombalaha Ma U Fiican Yihiin Caruurta?
Caruurta dunida oo dhan gaar ahaan wiilasha ciyaartani waxa ay soo wadeen muddo boqolaal sano ah sida uu qoraayo webseetka child-encyclopedia.
Arinta ugu xanuunka badan ee waalid qalbigiisa damqineysa waxa ay noqon kartaa marka uu maqlo “canugaada xabad ayaa dishay”, taasina waa waxa ugu badan ee dhici karo-hadii ay bataan “dadka hubeysan” ama qoryooleyda.
Dr Axmed Xalaal oo ah dhaqtarka indhaha ayaa aaminsan in qoriga-boomblaha caruurta uu leeyahay waxyeelo Caafimaad.
“Qaarkood ayaa nabarro ka gaareen bu’da madow, qaarkood indhaha ayuu dhiig uga furmay, intaas oo dhaawac ah waxaa sabab u ah waalidiinta caruurta u iibinaya baskooladahan, iyo ganacsatada suuqa soo galisa” ayuu yiri Dr Xalaal oo sheegay in uu xafiiskiisa ku qaabilay ilaa seddex caruur ah oo qoryahani ay soo waxyeeleeyeen.
Dr Axmed Xalaal oo wiisateynaya caruur ay indhaha uu ka soo dhaawacay qoriga boomblaha ee caruurta
Hadii aan markale su’aasha ku celiyo “qoryaha boomblaha ma u fiican yihiin Caruurta?-waxa ay ila tahay waxaa dhihi laheyd “maya, sababtoo ah wey dhaawaceysaa.
Ii ogolow in aan aniga su’aasha fikirkeyga ugu jawaabo, Waxaan dhihi Maya/Haa, xitaa hadii dhibkiisu uu leeyahay, caruurtana ku sababi karo dhaawac jireed, waa kan dhanka fiican ee ah in ay fiicantahay caruurta oo ku ciyaarta “boombalaha Qoriga”.
Marka cauurta loo diido in ay ku ciyaaraan “hubka”, waxa ay ka dhigantahay in aan awoodda garashada maskaxdooda ka dhigeyno mid xadidan, caruurta dunida oo dhan gaar ahaan wiilasha ciyaartani waxa ay soo wadeen muddo boqolaal sano ah sida uu qoraayo webseetka child-encyclopedia.
Qaababka Caruutaada aad ugu ciyaarsiin karto “qoryo-boombaleedka”
-bar caruurta goobaha halista ee ay haboontahay in la ilaaliyo sida wajiga, indhaha iw.
-Fiiro u yeelo luqaadda ay ku ciyaarayaan.
–Kala bar caruurta maxaa run ah maxaa been ah
–Xadid waqtiga ay ciyaarayaan.
Ugu dambeyntii waxan jecelahay in aan kula wadaago dareenkeyga xishoodka marka aan qoraayo mowduucan oo kale aniga oo aan wali waalid noqon, waxa aan raali gelinayaa dhamaan waalidiinta, aniga oo filanaayo in caruurteena ay noqdaan hantida keydka ah ee dalka.